अबको नेत्रित्वो युवाको - Nepal Bizz
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले मुलुकको नेतृत्व युवाले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उपसभापति निधिले बिहीबार ग्लोबल युथ एलाइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक परिवर्तनमा युवाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो । ‘लोकतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलन, गणतन्त्रदेखि संविधान निर्माणसम्म युवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सबै पार्टीमा युवा पंति अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्व युवाले लिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक नेतृत्वले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाे बताउनुभयो । ‘ठूला राजननीतिक दलले युवा उचित स्थान दिन सकिरहेका छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र उपयुक्त जिम्मेवारी नपाउँदा युवा लोकतन्त्रविरोधीको पछि लाग्न बाध्य भएका छन् । ’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले राजनीतिमा अयोग्य युवा बढी आउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘राजनीतिमा आएका युवा उमेरले मात्र युवा छन् तर उनीहरु र योग्य छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
Posted on २९ श्रावण २०७६, बुधबार ०८:३६ Author admin
२९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेदेखि नै केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लगाउँदै आएका छन् । उनले अधिकांश भाषणमा समृद्धिको यो प्रसंग हत्तपत्त छुटाउँदैनन् । देश समृद्धिको नारा दिएका प्रधानमन्त्री साच्चै यो अभियानमा खरो उत्रिएका छन् त ? कान्तिपुर दैनिकले आज प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारेको परियोजनाको रौंचिरा केलाउँदै उनको […]
किन धमाधम सेयर बेच्ना थाले अमेरिकाका टप सीइओहरुले -कतै मन्दीको संकेत त होइन ।